Ukuhlanzeka kwamakhala ezinganeni | Bezzia
Ukuhlanzeka kwamakhala ezinganeni
UMaria Jose Roldan | 05/09/2021 11:36 | Babies
Ukuhlanzeka ngamakhala ezinganeni kungumsebenzi abazali okufanele bawenze ngokucophelela nangobumnandi. Kubalulekile ukwenza le nhlanzeko njalo, ikakhulukazi lapho ingane iqunjelwe. Ukukwazi ukuhlanza amakhala kungasiza ingane ukuba iphefumule kangcono, into ebaluleke kakhulu uma kukhulunywa ngokuthola ubuthongo obuhle kakhulu.
Esihlokweni esilandelayo sizokhuluma kancane ngokuhlanzeka kwamakhala ezinganeni nase imihlahlandlela okufanele ilandelwe ukukwenza ngendlela engcono kakhulu.
1 Uyenza nini inhlanzeko yamakhala ezinganeni
2 Izinyathelo lapho kwenziwa inhlanzeko efanele yamakhala ezinganeni
Uyenza nini inhlanzeko yamakhala ezinganeni
Inhlanzeko enjalo kufanele yenziwe ngendlela ejwayelekile ukususa amafinyila ngangokunokwenzeka futhi kuhlanzwe amakhala. Uma kwenzeka ingane ihlaselwa umkhuhlane, abazali kumele benze inhlanzeko enjalo ngokucophelela futhi baqinisekise ukuthi omncane uyakwazi ukuphefumula kahle ngangokunokwenzeka. Ukuqeda amafinyila ngangokunokwenzeka nakho kubalulekile ukuze omncane angahlushwa izifo ezithile ezinjengesinusitis.
Ngaphandle kwenhlanzeko yamakhala, abazali bangakhetha ukubeka umswakama egumbini ukuze kugcinwe indawo enomswakama futhi bagweme isiminyaminya ezindlebeni zamakhala zomntwana. Ezinyangeni zasebusika futhi ngenxa yokushisa, imvelo iba yomile ngokweqile futhi isiminyaminya siba sibi kakhulu, yingakho ukubaluleka kokusebenzisa isihlanganisi.
Izinyathelo lapho kwenziwa inhlanzeko efanele yamakhala ezinganeni
Into yokuqala abazali okufanele bayenze ukubeka ingane yabo phansi, endaweni ethambile futhi ethokomele. Into elandelayo abazali okudingeka bayenze ukwenza ingane yabo ikhululeke ngangokunokwenzeka. Ngalokhu, kuhle ukuthola usizo lomlingani wakho noma omunye umuntu.
Ngemuva kwalokho kufanele bangeze amaconsi ambalwa kasawoti womzimba emakhaleni womabili. I-serum isiza ukuqeda amafinyila aseqoqekile futhi ngale ndlela iqinisekise ukuthi omncane angaphefumula kangcono kakhulu. Ngaphandle kwe-serum, Abazali bangasebenzisa futhi isisombululo sikasawoti lokho kusiza ukuhlanza ngokuphelele ikhala.
I-aspirator edumile ivame ukuphikisana futhi kunconywa kuphela ukuyisebenzisa uma kwenzeka ukuthi i-mucus ibaluleke kakhulu. Kufanele uqaphele kakhulu uma uyisebenzisa ngoba uma isetshenziswa ngokungazelelwe, ingadala ukulimala kwezindlebe njenge-otitis. Noma kunjalo, ochwepheshe beluleka ukusetshenziswa kwe-serum noma nini lapho kufanele khona.
Ngamafuphi, inhlanzeko yamakhala ibaluleke kakhulu ezinyangeni zokuqala zempilo yengane. Njengoba sesishilo ngenhla, kuyinto okumele yenziwe ngokucophelela ukugwema ukwenza ingane itatazele kakhulu. Inhlanzeko kufanele yenziwe nengane ikhululeke ngokuphelele futhi isebenze ezimeni eziningi kakhulu, i-serum yomzimba noma isisombululo sikasawoti. Ukuminyana ezinganeni kuvame kakhuluNgakho-ke ukubaluleka kwenhlanzeko enhle ukuqeda amafinyila amaningi emaphashini acinene.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Babies » Ukuhlanzeka kwamakhala ezinganeni
Ungazi kanjani uma ungumuntu ofuna ukuphelela
Imichilo yenkukhu enopelepele obomvu nama-alimondi